Vaksin-dia handehanana any Brezila: hisorohana aretina ary hankafy ny dia | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 28/05/2021 10:40 | Brasil, soso-kevitra
Ny firesahana momba ny vaksinna handehanana any Brezila dia midika hoe manao azy soso-kevitra, tsy adidy. Midika izany fa ny governemanta breziliana dia tsy mitaky karazana fanaovana vaksiny hiditra ao amin'ny firenena. Afa-tsy ireo fepetra takiana azo avy amin'ny areti-mandringana (ity misy lahatsoratra iray momba izany ireo fenitra ireo araka ny firenena), Tsy misy fepetra ara-pahasalamana ara-dalàna hitsidika ny tanin'i Rio de Janeiro.
Na izany aza, tokony hotadidinao fa i Brezila no firenena fahadimy lehibe indrindra manerantany. Izy io dia manana valo kilometatra toradroa kilometatra toradroa ary ahitana fahasamihafana lehibe na ara-toetrandro na ara-jeografika. Noho izany, tena ampirisihina mafy izany mahazo vaksiny sasany handehanana any BrezilaIndrindra raha mankany amin'ny faritra sasany ianao.
1 Vaksiny handeha any Brezila, mihoatra ny tolo-kevitra fotsiny
1.1 Vaksinin'ny tazo mavo
1.3 Vaksinin'ny hépatite A.
1.4 Vaksinin'ny hepatita B
1.5 Vaksinin'ny MMR
2 Fitandremana hafa amin'ny dia any Brazil
Vaksiny handeha any Brezila, mihoatra ny tolo-kevitra fotsiny
Araka ny efa nolazainay, ny firenena amerikana atsimo dia midadasika ary misy ampahany tsara amin'ny Amazon. Noho izany dia tsy mila vaksinina mitovy amin'izany ianao raha mandeha any amin'ilay farany toa ny fanaonao Rio de Janeiro, ohatra.
Na izany na tsy izany, misy maromaro amin'izy ireo izay tena atoro anao tsy miankina amin'ny faritany tsidihinao. Ary tsy misy amin'izy ireo handratra anao, ka tsy ho very na inona na inona ianao amin'ny fametahana azy ary fisorohana ny loza mety hitranga amin'ny aretina mampidi-doza. Azonao atao ny mangataka fotoana hisolo tena anao amin'ny iray amin'ireo ivontoerana fanaovana vaksiny iraisam-pirenena an'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny any Espana ao Ity rohy ity. Saingy, tsy mila adim-potoana lavitra intsony, hiresaka aminao momba ny vaksininy handehanana any Brezila izay atolotra anao izahay.
Vaksinin'ny tazo mavo
Ny aedes aegypti matahotra, ny antony mahatonga ny tazo mavo
Ity dia aretina mahazatra any amin'ny firenena amerikana atsimo, ka hatramin'ny vao tsy ela akory izay dia nitaky ny hanaovana vaksiny ny tompon'andraikitra aminy alohan'ny hidirany ao amin'ny firenena. Ny tazo mavo dia aretina mamindra mahery vaika izay ampitain'ny moka amin'ny manaikitra azy. Aedes aegypti, antsoina koa hoe moka mami.
Io bibikely io koa dia mamindra ny voan'ny dengue, mampidi-doza kokoa, satria tsy misy vaksininy. Saingy, miverina amin'ny tazo mavo, ny soritr'aretiny dia, mazava ho azy, tazo, aretin'andoha ary aretin-damosina, maloiloy ary mandoa. Raha tsy voatsabo ara-potoana io dia manomboka mivoatra ilay marary jaundice (avy eo ny adjective mavo) ary mijaly amin'ny hemorrhages. Ity dingana faharoa ity dia manolotra fahafatesan'ny 50% eo ho eo.
Noho izany, aretina lehibe tokoa io. Ary, satria tsy mandany vola na inona na inona ianao hanaovana vaksiny, ny torohevitray raha mandeha any Brezila ianao dia ataonao mba hilamina hatrany. Na ahoana na ahoana, raha mitsidika an'i Amazon ianao dia tadidio fa tsy miaro anao amin'ny voalaza etsy ambony ity vaksininy voan'ny dengue. Ka manaova akanjo lava lava ary makà fanafody moka mahery.
Tsy toy ny taloha, io aretina io dia mijaly rehefa mikraoba Clostridium tetani mamindra ratra. Araka ny fantatrao tsara, dia azo amboarina mora foana izy ity, indrindra raha mandeha any amin'ireo faritra ala any Brezila ianao. Ary tsy maintsy tadidinao fa ny bakteria voalaza etsy ambony dia hita ao misy faritra maloto rehetra. Ohatra, dia fahita matetika amin'ny metaly misy oksizenina.
Noho izany, tsy sarotra aminao ny mifanena aminy. Ho setrin'izany, ny clostridium hiteraka neurotoxins izay misy fiantraikany amin'ny rafi-pitabatabana iray manontolo. Ny soritr'aretiny lehibe indrindra dia ny spasme, ny fihenan'ny hozatra mahery setra, ny hamafiny ary na ny paralysisa aza. Miaraka aminy ny tazo, ny hatsembohana tafahoatra ary ny fandefasana rano.
Ankoatra ny fijaliana aterak'izany, raha tsy voatsabo ara-potoana dia mety hahafaty. Noho izany, araka ny natoronay anao teo aloha, tsy ho very na inona na inona ianao amin'ny fanaovana vaksiny hiadiana amin'ity aretina ity.
Etsy ankilany, matetika ny vaksinin'ny tetanosy dia misy ireo difiteria ary ny kohaka kohaka, koa nanolorana azy ho any Brezila. Ny voalohany dia aretina mamindra izay mifindra am-bava, indrindra amin'ny kohaka na fitsapana. Vokatry ny antso Klebs-Löffler bacillus ary mety ho matotra indrindra amin'ny ankizy kely izany.
Mikasika ny kohaka kohaka, dia areti-mifindra vokatry ny bakteria koa io Bordetella pertussis. Ny mampiavaka azy dia ny kohaka spasmodika ary mifindra be izy io. Toy ny teo aloha dia misy fiatraikany amin'ny ankizy kely kokoa izany. Na izany aza, raha tsy miteraka fahasarotana dia matetika no sitrana.
Vaksinin'ny hépatite A.
Filaharana hahazoana vaksiny
Areti-mifindra koa io, miteraka fivontosan'ny atiny. Izy io dia novokarin'ny virus hépatite A na Paramyxovirus 72 ary tsy dia matotra kokoa noho ireo fiovana hafa mitovy amin'ny aretina izay hiresahanay aminao ihany koa.
Raha ny marina dia tsy afaka manjary maharitra na miteraka fahasimbana amin'ny atiny maharitra izy io. Saingy mora azo ifanarahana izy io satria nampitain'ny sakafo na rano voaloto, ary koa amin'ny alàlan'ny sehatra maloto. Noho izany antony izany, manoro hevitra anao izahay hanasa tanana matetika, zavatra izay, tsy isalasalana, dia ho fantatrao noho ny coronavirus.
Ary, mazava ho azy, mamporisika anao izahay hanao vaksiny hiadiana amin'ny hépatite A. Voaroba in dosie roa enim-bolana ny elanelany. Mora ny mandeha any Brezila, noho izany dia tokony handinika ny fandraisana ny vaksininy amin'ny fotoana mety ianao. Raha te hanana azy io dia mila enim-bolana handalovana ianao, araka ny efa nolazainay.
Vaksinin'ny hepatita B
Virosy Hepatite B
Azonay atao koa ny milaza aminao momba an'io aretina io, ilay zavatra natoronay ho an'ny hépatite A. Na izany aza, ny fahamaotinana B dia mampidi-doza kokoa, satria afaka miteraka aretina mitaiza ary io kosa dia mety hiteraka tsy fahombiazan'ny aty, cirrhosis na homamiadan'ny aty.
Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy matotra izany. Saingy mety maharitra efa-bolana vao miseho ny soritr'aretina manomboka amin'ny fotoana maharary anao. Amin'ity tranga ity dia ampitain'ny tsiranoka amin'ny vatana. Ohatra, ra na tsirinaina, fa tsy avy mikohaka na mievina.
Ho fanampin'izany, mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny lalan-dra hafa, dia mora miteraka aretina matetika kokoa ny hépatite B tanora noho ny amin'ny lehibe. Vokatr'izany dia tsara ny manao vaksiny alohan'ny handehanana any Brezila. Amin'ity tranga ity, ny antigen ahitana roa na telo fatrany itantanana, toy izany koa, miaraka amin'ny elanelam-potoana io ny enim-bolana.
Ankizy iray nahazo vaksinin'ny MMR
Io no anarana nomena ilay misoroka aretina toy ny kitrotro, rubella, ary mumps. Ny voalohany dia aretina amin'ny karazana exantematika, izany hoe, misy fery mena amin'ny hoditra, ateraky ny virus iray, avy amin'ny fianakaviana manokana paramyxoviridae. Ny famantarana iray hafa amin'ity aretina ity dia ny kohaka ary, raha mamaivay ny ati-doha, dia mety ho matotra be.
Ho an'ny rubellaAreti-mifindra koa izy io izay miseho miaraka amin'ny fivontosan'ny hoditra ary ateraky ny virus. Amin'ity tranga ity dia ampitain'ny lalan-drivotra ary eo anelanelan'ny dimy ka hatramin'ny fito andro vao hiseho ny tenany, fa tena mifindra. Na izany aza, raha tsy amin'ny vehivavy bevohoka dia tsy matotra izany. Amin'ireny dia mety hanimba ny embryon izay miteraka fahasimbana maharitra.
Ary farany, ny parotitis aretina mahazatra ihany koa io. Mety tsy ho mahazatra anao ny anarany. Nefa, raha milaza aminao izahay fa izany no izy ny mumpsAzo antoka fa efa naheno momba azy ireo ianao. Ampitain'ny Mumps myxovirus, na dia misy karazany hafa ateraky ny bakteria aza. Tsy aretina lehibe koa io raha mbola tsaboina. Raha tsy izany ary amin'ny toe-javatra tafahoatra dia mety hitarika meningite, pancreatitis na tsy fiterahana amin'ny lehilahy izany.
Ny vaksinin'ny MMR dia manakana ireo aretina rehetra ireo ary omena dosie roa mandritra ny efatra herinandro.
Fitandremana hafa amin'ny dia any Brazil
Ireo nohazavainay taminao dia ny vaksininy handehanana any Brezila izay atolotry ny manampahaizana manokana. Manoro hevitra anao izahay hametraka azy ireo raha hanao izany ianao. Saingy, ho fanampin'izay, asaina manaraka ny fitandremana hafa ianao amin'ny dianao mba tsy hanimba ny fahasalamanao.
Ny dingana voalohany dia ny fisoratanao anarana ho an'ny Fisoratana anarana amin'ny mpitsangatsangana an'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny ary manakarama a fiantohana ara-pitsaboana. Ataovy ao an-tsaina fa tsy manan-kery any Brezila ny Security Social Spanish. Noho izany, raha sendra marary ianao, ny fandaniana rehetra handany vola aminao izy ireo. Ary ao anatin'izany ny hopitaly, ny fitsaboana ary ny fampodiana azy ireo aza.
Etsy ankilany, ny zavamiaina rehetra dia manome soso-kevitra fa, rehefa misotro rano dia misotro azy fotsiny ianao tavoahangy, tsy avy amin'ny paompy na loharano velively. Toy izany koa ny voankazo sy legioma nohaninao tsara nosasana sy novonoina otrikaretina.
Mikasika ny morontsiraka, alao antoka fa tsy voaloto izy ireo. Amin'ny Sao Paulo y Santa Catarina misy vitsivitsy izay voarara ny fandroana. Ary, ny amin'ny fanafody, ento avy any Espana izy ireo hialana amin'ny fihintsanan'ny azy ireo. Na izany aza, azo zahana amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo rehefa tonga. Noho izany, mamporisika anao izahay mba hitondra ny fomba fahandro na antontan-taratasy manamarina fa mandray azy ireo ianao.
Na ahoana na ahoana, raha misalasala ianao, dia mamporisika anao izahay hitsidika ny tranokalan'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny hanazava izay rehetra mbola manontany tena anao.
Ho famaranana, dia efa nilaza taminareo ireo rehetra ireo vaksinina handehanana any Brezila atolotry ny manam-pahaizana. Tsy misy misy vokany ratsy, ka manoro anao izahay hametraka azy ireo. Ary, raha mbola manana fisalasalana ianao, dia tsara koa ny manatona hevitra ny dokoteranao. Araka izany, handeha soa aman-tsara ianao ary hiaina a traikefa miavaka tsy misy aretina mety hanimba anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Brasil » Vaksiny hitsangatsangana any Brezila
Sakafo mahazatra an'ny Veracruz